सुप्रिम कोर्टले झटका दिएपछि ममताले उठाइन धरना : भनिन्,-म राजिवको लागि होइन देशको लागि धरना बसेकी थिएँ - खबरम्यागजिन
Homeमुख्य समाचारसुप्रिम कोर्टले झटका दिएपछि ममताले उठाइन धरना : भनिन्,-म राजिवको लागि होइन देशको लागि धरना बसेकी थिएँ
चीफ जस्टिस रञ्जन गोगोईले सोधे, ‘राजिव कुमारलाई केरकारमा के समस्या छ? आखिर कमिश्नर सीबीआईअघि किन पेश भइरहेका छैनन्? पश्चिम बङ्गाल सरकारलाई हाम्रो जाँचको आदेशसँग कस्तो समस्या छ?’
कलकत्ता,5फरवरी
पश्चिम बङ्गालका मुख्‍यमन्त्री ममता व्यानर्जीले तीनदिनपछि आज साँझ धरना उठाइन्। आन्ध्र प्रदेशका मुख्‍यमन्त्री चन्द्रबाबू नायडूले उनलाई धरना तोड्ने सुझाव दिएका थिए। कलकत्ता पुलिस आयुक्तको घरमा सिबीआई पसेको देखेर ममताले धरना शुरु गरेकी थिइन्।
ममता व्यानर्जी सरकारलाई सुप्रिम कोर्टले बलियो झटका दियो। सुप्रिम कोर्टले कलकत्ता पुलिस कमिश्नर राजिव कुमारलाई सारदा चिटफण्ड घोटालाबारे केरकारको निम्ति सिबीआई सामु उपस्थित बन्ने आदेश दिएको छ।
शीर्ष न्यायालयले राजिवको अहिले पक्राउ नहुने बताएको छ। तीनदिनदेखि सिबीआई विरुद्ध र राजिव कुमारको रक्षाको लागि ममता व्यानर्जी धरनामा बसेकी थिइन्। तर सुप्रिम कोर्टको आदेशले उनलाई गतिलो झटका लाग्यो। झट्का लाग्नसाथ उनलाई धरना उठाउन पऱ्यो।
न्यायालयले राज्यका मुख्य सचिव, डीजीपी र कलकत्ता पुलिस कमिश्नरलाई सीबीआईको मानहानि याचिकामा नोटिस जारी गरेको छ। मामिलाको अघिल्लो सुनवाई 20 फरवरीमा हुनेछ।
सुप्रिम कोर्टको आदेशबारे व्यानर्जी बोल्न मानिनन्। भनिन्, ‘तथ्य हेरेर बोल्छु। तर नैतिकरूपले हाम्रै जित भयो। केन्द्र संविधान उलङ्घन गर्दैछ।’
यता राजिव कुमारले पनि भने, ‘मैले सिबीआईलाई भेट्दिन भनेको छैन। सही ठाउँमा भेट्न चाहन्छु।’
व्यानर्जीअनुसार सिबीआई नोटिस बिना नै राजिवको घर पुगेको थियो। तर राजिवले सिबीआईलाई कहिल्यै भेट्दिन भनेको छैन। केन्द्रले व्यर्थैमा राज्यको काममा बाधा गर्दैछ।
‘म राजिवको लागि धरना बसेकी होइन,’ मुख्यमन्त्रीले भनिन्, म त देशको लागि पो धरनामा बसेकी हुँ। म जनताको लागि बसेको हुँ।’
उल्लेखनीय छ, हजारौं करोड़ रुपियाँको शारदा चिटफण्ड घोटालामा कलकत्ताका पुलिस कमिश्नर राजिव कुमारसँग केरकार गर्न पुगेको सीबीआईको टीमलाई रोकेको तथा हिरासतमा लिएको मामिलामा आज सुप्रिम कोर्टमा सुनवाइ भएको हो।
सुप्रिम कोर्टले पुलिस कमिश्नर राजीव कुमारलाई जाँचमा सहयोग गर्ने र सीबीआईअघि उपस्थित हुने निर्देश दिएको छ। सुप्रिम कोर्टको निर्देशका अनुसार राजीव कुमार केरकारका लागि मेघालयको शिलङमा सीबीआईसमक्ष एक तटस्थ स्थानमा उपस्थित हुनपर्नेछ। यद्यपि अहिले राजिव कुमार पक्राउ नपर्ने सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ।
उल्लेखनीय छ, ममता सीबीआई र भाजपाविरुद्ध तीनदिनदेखि धरनामा बसेकी थिइन्। सर्वोच्चको यो आदेशले उनलाई ठूलो झट्का लागेपछि धरना उठाइन्।
चीफ जस्टिस रञ्जन गोगोईले सोधे, ‘राजिव कुमारलाई केरकारमा के समस्या छ?
‘एसआईटीले प्रमाणहरूसँग छेड़छाड़ गऱ्यो। र मामिलाको सही जाँच गरेन,’ सीबीआईको तर्फबाट पेश भएका अटर्नी जेनरल केके वेणुगोपालले भने, ‘बङ्गालमा संवैधानिक संस्था खलबलिएको छ। एसआईटीले डेटा और ल्यापटपलाई सुरक्षित राख्न सकेन। साथै सीबीआईलाई गलत कल्स डेटा दियो।’
बङ्गाल सरकारको तर्फबाट पेश भएका वरिष्ठ उकिल अभिषेक मनु सिङ्घवीले पनि भने, ‘सिबीआईले कलकत्ता पुलिस कमिश्नरलाई सताउन चाहन्छ। सfबीआईले अधिकारीहरूलाई सताउने काम गरिरहेको छ।’
यसमाथि सुनवाइ गर्दै चीफ जस्टिस रञ्जन गोगोईले सोधे, ‘राजिव कुमारलाई केरकारमा के समस्या छ? आखिर कमिश्नर सीबीआईअघि किन पेश भइरहेका छैनन्? पश्चिम बङ्गाल सरकारलाई हाम्रो जाँचको आदेशसँग कस्तो समस्या छ?’
चीफ जस्टिसको नेतृत्वमा रहेको खण्डपीठले भनेको छ, ‘कलकत्ता पुलिस कमिश्नरलाई जाँचमा सामेल हुने आदेश दिनमा समस्या समस्या छैन।’